Miralem Pjanic oo farriin u soo diray Taageerayaasha Kooxdiisa cusub ee Barcelona… (Muxuu yiri?) – Gool FM
Haaruun September 12, 2020
(Barcelona) 12 Sebt 2020. Miralem Pjanic ayaa beegsaday warbaahinta xiriirka bulshada ee dhinaca Internet-ka si uu ula wadaago Taageerayaasha farxaddiisa ugu dambeyn inuu shaqo ka helo Kooxda Barcelona, wuxuu u arkaa sharaf inuu xirto maaliyadda kooxdiisa cusub.
“Cidna weligeed xusuustaada kaama qaadan karto, laakiin tani waa bilow cusub iyo sheeko cusub oo cajiib ah,” ayuu Pjanic soo dhigay, iyadoo ay wehliyaan saddex sawir oo ahaa tababarkiisii saakay.
Pjanic ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxdiisa reer Spain kaddib markii uu ka soo kabsaday Korona Fayras, dhowaan ayaana loo ogolaan doonaa inuu ku biiro kooxda waa weyn isla markaana uu ogaado doorkiisa cusub ee Tababare Ronald Koeman.
Inkastoo kooxdu ay ciyaari doonto kulamadeedii ugu horreeyey ee isdiyaarinta ayey wajahaysaa caawa naadiga Nastic, Pjanic iyo Todibo waxay raadinayaan inay dhisaan taam ahaanshahooda, iyagoo rajeynaya inay ka mid noqdaan shaxda soo aaddan.
Paul Pogba oo dib ugu soo laabtay Tababarka Kooxda Man United kaddib markii uu ka soo kabsaday Korona Fayras